မနကျဖွနျ မိုးကွီးမညျ့ ဒသေမြား နဲ့ မွို့နယျမြား စာရငျး – Daily Feed MM
မနကျဖွနျ မိုးကွီးမညျ့ ဒသေမြား နဲ့ မွို့နယျမြား စာရငျး
Admin_John | June 28, 2021 | Local News, Weather | No Comments
မနကျဖနျ အင်ျဂါနေ့ (၂၉/၆/၂၀၂၁) အတှကျ မိုးအခွအေနေ ကွိုတငျခနျ့မှနျးခကျြမြား….. Skymet-India နှငျ့ Meteoblue app: Switzerland (၂)မြိုးဖွငျ့ဖျေါပွထားပါသညျ ။
🌦️ ပုံ-၁ (Skymet-India)
(မိုးရခြေိနျကို မီလီမီတာဖွငျ့တရကျစာ(၂၄ နာရီအတှကျ)ဖျေါပွပါထားသညျ)
👉🏿 မိုးနခြေိနျကို mm/day (၂၄ နာရီ/၁ရကျအတှငျးရှာသှနျးသော မီလီမီတာ မိုးရခြေိနျ)
အစိမျးနုရောငျ 0~5 mm ( 0~0.2 လက်မ) ၊
အစိမျးရငျ့ရောငျ 5~10 mm ( 0.2~0.4 လက်မ) ၊
အဝါရောငျ 10~20 mm ( 0.4~0.8 လက်မ)
လိမ်မျောဝါ 20~30 mm (0.8~1.2 လက်မ)
⚠️ ⚠️ ထို့အထကျ လိမ်မျောနီ/အနီ/အနီပုပျအရောငျမြား စသညျ ဖွငျ့ ဒသေမြားသညျ မိုးမြား>>>မိုးကွီးနိုငျသောဒသေမြားအဖွဈ မှတျယူပါ ။
🌦️ ပုံ-၂ မှ ၁၀ အထိ (Meteoblue app:/ Switzerland )
(မနကျ ၁း၀၀/ ၄း၀၀/ ၇း၀၀ / ၁ဝး၀၀ /နေ့ ၁း၀၀/ ညနေ ၄း၀၀ / ည ၇း၀၀/ ၁ဝး၀၀/နောကျတဈနမေ့နကျ ၁း၀၀ )အထိ
(မိုးရခြေိနျကို လက်မဖွငျ့ ၃နာရီစာ ဖျေါပွထားပါသညျ)
👉🏿 အပွာရောငျ (မိုးပါးပါး) မှသညျ >>> အစိမျးရောငျ >>> အစိမျးနုရောငျ >>> အဝါနုရောငျ (မိုးမြား) …..>>> ⚠️⚠️ အနီရောငျ (မိုးကွီး) ညှနျးဆိုပါသညျ။
👉🏿 (မိမိတို့အရပျဒသေ ဘယျအခြိနျလောကျမိုးရှာနိုငျသညျ/ဘယျလောကျရှာနိုငျသညျကို ကွိုတငျခနျ့မှနျးနိုငျပါသညျ)
❗မနကျဖနျ (၂၉/၆/၂၀၂၁) မွနျမာနိုငျငံအလယျပိုငျး ဒသေ တခြို့တို့တှငျ ရံဖနျရံခါလပွေငျးမြား ±20mph ဝနျးကငျြရှိနိုငျပါသညျ။(ပုံ-၁၁/၁၃)
❗ ကခငျြပွညျနယျ( အထူးသဖွငျ့ ဆှနျပရာဘှနျနှငျ့အနောကျဖကျဒသေမြား/ ကခငျြပွညျနယျ၏အရှဖေ့ကျခွမျးနှငျ့ဆကျစပျနယျစပျဒမြေား) နှငျ့ စဈကိုငျးတိုငျးအထကျပိုငျး ဒသေတခြို့တို့တှငျ နရောကှကျမိုးမြားနိုငျ/မိုးကွီးနိုငျပါသညျ။
❗ ဧရာဝတီနှငျ့ခငျြးတှငျးမွဈမြား၏ မွဈဖြားခံရာ မွောကျပိုငျးဒသေမြားတှငျ မိုးမြား ရှာသှနျး ၊မိုးမြားလာခွငျးကွောငျ့ ထိုမွဈတို့၏ လကျတကျ ခြောငျး/မွဈ‌ရမြေားအသီးသီး‌သညျလညျး မွငျ့တကျလာနပေါသညျ။ သတိပါအမြိုးတို့ ….
(Posted @ 2130 hr/ 28th. June, 2021).
မနက်ဖန် အင်္ဂါနေ့ (၂၉/၆/၂၀၂၁) အတွက် မိုးအခြေအနေ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များ….. Skymet-India နှင့် Meteoblue app: Switzerland (၂)မျိုးဖြင့်ဖေါ်ပြထားပါသည် ။
(မိုးရေချိန်ကို မီလီမီတာဖြင့်တရက်စာ(၂၄ နာရီအတွက်)ဖေါ်ပြပါထားသည်)
👉🏿 မိုးနေချိန်ကို mm/day (၂၄ နာရီ/၁ရက်အတွင်းရွာသွန်းသော မီလီမီတာ မိုးရေချိန်)
အစိမ်းနုရောင် 0~5 mm ( 0~0.2 လက္မ) ၊
အစိမ်းရင့်ရောင် 5~10 mm ( 0.2~0.4 လက္မ) ၊
အဝါရောင် 10~20 mm ( 0.4~0.8 လက္မ)
လိမ္မော်ဝါ 20~30 mm (0.8~1.2 လက္မ)
⚠️ ⚠️ ထို့အထက် လိမ္မော်နီ/အနီ/အနီပုပ်အရောင်များ စသည် ဖြင့် ဒေသများသည် မိုးများ>>>မိုးကြီးနိုင်သောဒေသများအဖြစ် မှတ်ယူပါ ။
🌦️ ပုံ-၂ မှ ၁၀ အထိ (Meteoblue app:/ Switzerland )
(မနက် ၁း၀၀/ ၄း၀၀/ ရး၀၀ / ၁ဝး၀၀ /နေ့ ၁း၀၀/ ညနေ ၄း၀၀ / ည ရး၀၀/ ၁ဝး၀၀/နောက်တစ်နေ့မနက် ၁း၀၀ )အထိ
(မိုးရေချိန်ကို လက္မဖြင့် ၃နာရီစာ ဖေါ်ပြထားပါသည်)
👉🏿 အပြာရောင် (မိုးပါးပါး) မှသည် >>> အစိမ်းရောင် >>> အစိမ်းနုရောင် >>> အဝါနုရောင် (မိုးများ) …..>>> ⚠️⚠️ အနီရောင် (မိုးကြီး) ညွန်းဆိုပါသည်။
👉🏿 (မိမိတို့အရပ်ဒေသ ဘယ်အချိန်လောက်မိုးရွာနိုင်သည်/ဘယ်လောက်ရွာနိုင်သည်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်)
❗မနက်ဖန် (၂၉/၆/၂၀၂၁) မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဒေသ တချို့တို့တွင် ရံဖန်ရံခါလေပြင်းများ ±20mph ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပါသည်။(ပုံ-၁၁/၁၃)
❗ ကချင်ပြည်နယ်( အထူးသဖြင့် ဆွန်ပရာဘွန်နှင့်အနောက်ဖက်ဒေသများ/ ကချင်ပြည်နယ်၏အရှေ့ဖက်ခြမ်းနှင့်ဆက်စပ်နယ်စပ်ဒေများ) နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း ဒေသတချို့တို့တွင် နေရာကွက်မိုးများနိုင်/မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။
❗ ဧရာဝတီနှင့်ချင်းတွင်းမြစ်များ၏ မြစ်ဖျားခံရာ မြောက်ပိုင်းဒေသများတွင် မိုးများ ရွာသွန်း ၊မိုးများလာခြင်းကြောင့် ထိုမြစ်တို့၏ လက်တက် ချောင်း/မြစ်‌ရေများအသီးသီး‌သည်လည်း မြင့်တက်လာနေပါသည်။ သတိပါအမျိုးတို့ ….
မကှေးမှာ ကဆုနျလပွညျ့နကွေီ့း မုနျတိုငျး ဝငျလို့ သဈပငျကွီးတှကြေိုး လမျးတှေ ပိတျနေ
မဆေ့ေး ဆရာဝနျကွီး ဒျေါမွငျ့မွငျ့စိနျရဲ့ ကွကျသီးထဖှယျ အိမျပွနျခရီးပုံရိပျမြား
အသကျငငျနတေဲ့ တောငျကွီးမွို့က နာရီစငျ
Online Shopping လုပျသူမြား မှတျပုံတငျ၍ အခှနျဆောငျရတော့မညျ